Maxaa sababa Fashilka ganacsiga,WD.Cabdirisaaq Jubba (Qaybtii Koowaad) – Idil News
Maxaa sababa Fashilka ganacsiga,WD.Cabdirisaaq Jubba (Qaybtii Koowaad)
Posted By: Idil News Staff November 18, 2017
Waxyaabaha sababa fashilka ganacsiga aad ayay u badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobayaa 20 Qodob.
1-Kharash aan loo baahnayn oo la galo (over spending):-
2. Shaqada oon lahayn nidaam la raacayo (without guiding principles):
3. Ahmiyadd la’aan (lack of focus):
4. Aragti iyo ujeedo la’aan (lack of vision and objectives):
5. Shirkadda gudaheeda oo khiyaamo ka dhacdo (internal dishonest activities):
6. Kharashaadka suuq-gaynta oo la yareeyo (cutting down marketing budget):
7. Cabsi ka timaada loollamayaasha (fear of competition):
Adduunyadda waxaa hadda kusoo badanaaya in la lakala koobi (copy) gareeyo ama lakala xado fikradaha ganacsi. Loollanku wuxuu keenaa in aad weydo qayb ka mid ah macaamiishaadda kedibna qaybtii aad suuqa ku lahayd ayaa yaraan karta. Markaa dad badan oo ganacsi abuura ayaa ka cabsi qaba in fudud suuqa looga saaro.
Qaarna sannadka horaba waa ay xiraan markay arkaan shirkaddo kale oo suuqa kusoo biiray. Runtii ganacsiga iyo loollankiisu waa wax jiraaya ilaa inta adduunyada wax lakala gadanaayo markaa marnaba kama badbaadi kartid tartan. isku day in aad macaamiishada raali geliso, fikrado cusub abuurto (innovatives), suuqa aad la socoto marwalba daraasad cusub samayso (research) isla markaana aad ilaashato in aan cid kale isticmaalin magaca shirkaddada iyo summadda shirkadda (trademarks) kana diiwaan geli shirkaddaha ilaaliya xuquuqaha ganacsiga (patent and copyright).
8. Ogaan-sho la’aanta baahida macaamiisha (not knowing the customer demand):
Waxaa kale oo guul daro ku keeni kara ganacsigaaga adigoon ogayn baahida saxda ah ee ay qabaan macaamiishaadu (customers). Baahida macaamiishu waa ay is badbadashaa markaa waa in aad waqti fiican galisaa xog-uruurinta xaga suuqa (market research). Waana arinta keliya ee aad ku ogaan karto baahida saxda ah waana in aad kharashaad fiican ugu talo gashaa sidii aad xogta suuqa aad usoo heli lahayd, waxaa kale oo u baahan in aad la socoto waa sixirka alaabta aad gadayso waayo qiimaha sare (over pricing) dhib ayuu u keenaa shirkaddah cusub.
9. Sharciyada dawladda oo is bedela iyo amniga oo xumaada (new gavernment policy and lack of security):
10. Ku xirnaasho taliyayaal badan (depending on more advisors):
W/Q Cabdirisaaq Jubba .